✤I-Coy Cottage✤Uzijongile✤W/D✤A/C - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguShannon
Yonwabela bonke ubumnandi bekhaya xa kufuneka ungekho. Indlwana esanda kulungiswa kunye nendlu enefenitshala ngokupheleleyo ekwiikhilomitha ezi-4 ukusuka kwi-Rt 53 / iMbali yeRt 66, iibhloko nje ezisuka kuMlambo iKankakee.
Imizuzu nje emi-5 ukuya:
✦ iindawo zokutyela
✦ ibha yewayini
✦ Ishishini lotywala lendawo
✦ i-RT 66 yodumo (Siziikhilomitha ezi-4.5 ukusuka kwi-Gemini Giant!)
✧ Ukufikelela ngokulula kuyo yonke into enokunikelwa nguJoliet kumgama oziikhilomitha ezingama-20, kubandakanya iChicagoland Speedway / Route 66 Raceway.
✧ Iimayile ezi-7 ukufikelela ngokulula kwi-I55 yokukhwela ngokukhawuleza ukuya eChicago.
☆ Ibhedi eyiQueen eyi-1, Ibhedi egcweleyo e-1, Ibhedi e-1 yesofa ye-Queen
☆ 50” Ultra HD 4K TV kwigumbi lokuhlala
☆ Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo
☆ Umshicileli okumgangatho ophezulu ongenazingcingo
☆ Ukupholisa umoya
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo:
☆ Ioyile yokupheka
★★UKUCOCA★★ ngundoqo kuluhlu lwethu!
Kuhlala kukho ucoceko/ukucoca phakathi kweendwendwe.
Ikhaya lethu likwingingqi yaseResthaven eWilmington, IL. Yindawo ezolileyo, ezolileyo enokufikelela ngokulula kwiindawo zokutyela, iivenkile, kunye nemisitho. I-Wilmington ibekwe ecaleni kwendlela eyimbali engu-66 apho inqumla uMlambo i-Kankakee kwaye idibanisa eyona ndawo ingcono yasemaphandleni kunye ne-atmosphere yasezidolophini. Sineendawo ezininzi zokuzonwabisa zoluntu kunye neKakakee State Park ekumgama nje weemayile ezimbalwa. Indawo yedolophu enembali izaliswe ziivenkile zamandulo, iindawo zokutyela, kunye neentlobo ngeentlobo zamashishini amancinci aquka i-massage & wellness center, i-cafe yewayini, kunye ne-brewery esanda kuvulwa.
Siyavuya ukunika iindwendwe zethu indawo eziyifunayo. Oku kwenziwa lula ngokungena / khangela-ngaphandle usebenzisa iphedi yeqhosha lokungena. Nangona kunjalo, singabasekuhlaleni kwaye sinomntu ofumanekayo ukuba asincede kuzo naziphi na iimfuno.
Siyavuya ukunika iindwendwe zethu indawo eziyifunayo. Oku kwenziwa lula ngokungena / khangela-ngaphandle usebenzisa iphedi yeqhosha lokungena. Nangona kunjalo, singabasekuhlaleni k…